दिल्लीबाट रिलिज भएपछि यस्तो स्टाटस लेख्दै सम्झिए सन्दीपले आइपिएललाई - टि. एल. एन पोस्ट
Home खेलकुद दिल्लीबाट रिलिज भएपछि यस्तो स्टाटस लेख्दै सम्झिए सन्दीपले आइपिएललाई
तीन वर्ष अघि सन २०१८ को सिजनमा दिल्ली क्यापिटल (तत्कालीन दिल्ली डेयरडेभिल्स) ले २० लाख भारतीय रुपैयाँमा नेपालका युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई आफ्नो टोलीमा भित्र्याएको थियो। तीन वर्षको सम्झौता सकिएछि यस सिजन दिल्लीले सन्दीपलाई रिलिज गरेको छ। रिलिज भैसकेपछि सन्दिपले सामाजिक संजालहरुमा पोस्ट गर्दै दिल्ली क्यापिटललाई धन्यवाद दिएका छन्।
‘आइपिएलले मलाई धेरै नै दिएको छ । विशेष गरी दिल्ली क्यापिटल्सले मलाई विश्वास गर्यो र मलाई ब्रेक दियो’,’सबै दिल्ली क्यापिटलस परिवारलाई धेरै-धेरे धन्यवाद दिन्छु । तीन वर्ष निकै यादगार रह्यो ।’ साथै उनले दिल्लीका पूर्व सिइयो हेमन्त दुआको नामै लिएर उनलाई धन्यवाद दिएका छन्।
बिग बास लिग खेल्नका लागि अहिले अस्ट्रेलियामा रहेका सन्दीपले बिहीबार साँझ ट्विटरमा , फेसबुक र ईन्स्टाग्राममा पोस्ट गरी आफ्नो पूर्व क्लबलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन्।
आइपिएलमा दिल्लीले लिनु सन्दीपको जीवनका लागि ठूलो टर्निङ प्वइन्ट हुनपुग्यो । दिल्लीले आईपिएलमा लीइसकेपछि उनले विश्वका सबैजसो ठूलो फ्रेन्चाइज लिगमा सन्दीपले खेल्ने मौका पाइरहेका छन् ।
Previous articleप्रकाश सपुत र केकी अधिकारी अभिनित “माया बोलेको” सार्वजनिक
Next articleके हो ‘सुगर रिलेशनसीप’ ? कसलाई भनिन्छ ‘सुगर ड्याडी’ र ‘सुगर बेबी’ ?